Aiza no hiantsenana any Boston sy ny manodidina | Vaovao momba ny dia
Boston manolotra toerana isan-karazany hiantsenana, izay ahitanao akanjo ho an'ny tsiro rehetra sy ny vidiny isan-karazany amin'ny teti-bola rehetra. Newbury Street Io no arabe kanto indrindra eto an-tanàna, izay mampiavaka ny fananana marika tsara indrindra amin'ireo mpamorona malaza indrindra manerantany.
Toerana iray vidiana amin'ny vidiny ambany indrindra dia ny Filavoana ambany rihana. Izy io dia manana lakaly roa miaraka amin'ny entana tsy manam-petra ho an'ny tsiro rehetra sy amin'ny vidiny tsara indrindra. Ity toerana ara-barotra ity dia miavaka amin'ny fivarotana ireo entana lafo indrindra amin'ny vidiny ambany indrindra.
30 minitra monja miala an'i Boston, ao amin'ny tanàna mahafinaritra iray nofidian'ny mpizahatany hiantsena, ho hitanao ilay Fivoahana Premium Village Village, izay ahafahanao mividy entana amin'ny safidy faharoa tsara indrindra na marika tsy nahomby.
En Cape Cod ny toerana tsara indrindra hanaovana an'ity hetsika ity, ny fiantsenana Hyannis . Misy koa ny Cape cod mall, izay manolotra vokatra tena tsara sy marika tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra.
Raha mpankafy fahagola ianao dia Charles Street Io no toerana mety hanaovana ny fividiananao. Any Massachusetts dia ampirisihina hitsidika an'ity karazana fiantsenana ity Essex, izay manana mpivarotra fahagola 35 ary Salem, manam-pahaizana manokana amin'ny zavatra niavian-dranomasina.
Ireto dia toerana vitsivitsy monja amin'ireo toerana notsidihin'ireo mpizahatany indrindra rehefa miantsena. Raha manana fotoana hitsidihana ianao BostonAza adino ny mitsidika an'ireny faritra mahafinaritra ireny ary mividy marika tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Boston » Aiza no hiantsenana any Boston sy ny manodidina
Indonezia sy ireo foko misy azy: Ny momba an'i Minangkabau rehetra